Iholide ebhishi ebusika
Ebusika, kunanini ngaphambili, ngifuna ukulala amanga esihlabathini esicwebileyo, ngifake emanzini amanzi olwandle oluhlaza okwesibhakabhaka bese ngifaka ilanga elishisayo. Ngenxa yamaholide omnyaka omusha, amaholide ebhishi ebusika okwamanje ayinkinga.
Uma unquma ukuthi uhlela iholidi lolwandle ebusika , qala ngokuthola lapho ungathanda ukuya khona. Ama-ejenti ezokuvakasha anikeza eziningi zezinketho zeholide ebusika ebusika 2014 phesheya, futhi izindleko zemvume zihluka kakhulu, ngakho-ke ungakhetha njengendawo engabizi futhi ihhotela ngezindleko zenkululeko yentando yeningi, futhi uchithe amaholide akho endaweni yokunethezeka ehloniphekile, uhlezi ehhotela le-VIP.
Iholide ebhishi ebusika: amazwe
Kwabahambi abanesithakazelo emaholide angabizi ebhishi ebusika, okuthandwa kakhulu phakathi kwabakwaRussia nabakwa-CIS abahlala eGibhithe. Nakuba ngo-2013 leli zwe lanyakaziswa yizimpikiswano zezombangazwe, ngekwindla injabulo yaxhaswa. Ngaphezu kwalokho, izindawo zokubhuka zendabuko zazingqubuzana. Ukuphumula eGibhithe kunezinzuzo eziningi:
iholide lebhajethi enkulu kakhulu ebusika, izindleko zohambo lomuntu oyedwa zingama dollar angu-400 kuya ku-800;
ebusika, izinga lokushisa lomoya lilinganiselwa kuma-degree angu-25, izinga lokushisa kwamanzi yizi-22 degrees;
umbuso we-visa owenziwe lula;
okulinganiselwe isilinganiso samanani nesevisi.
Ngaphezu kwalokho, i-Egypt - izwe elinomlando wasendulo, ngakho ungahlanganisa ngempumelelo amaholide asebhishi kanye nokuvakashela emakhumbuzweni omlando namasiko.
Ukuphumula okunethezeka ku-UAE kuyaqhubeka nokufunwa phakathi kwezivakashi. Lokhu kuchazwa kalula ukuthi amasiko aseMpumalanga kanye nempumelelo yempucuko yaseNtshonalanga ihlangene ngendlela engavamile kakhulu. Ebusika, abantu abaningi bathola ukuphumula kwe-beach e-Emirates ekhangayo nakakhulu kunehlobo elishisayo, ngenxa yemingcele ehambisana nesimo sezulu: izinga lokushisa lomoya lingaphansi kwama-degree 28-28, izinga lokushisa kwamanzi lingama-18-19 degrees. Amabhishi asetshenziwe kahle alungele ukuphatha amakhulu ezinkulungwane zezivakashi ngonyaka ngamunye. Uma uhlela ukuya eholidini ngoFebhuwari, uzothola ibhonasi eyengeziwe - imikhosi yezitolo egcinwe kuleli lizwe ikuvumela ukuba uthenge izintambo zamanje zakamuva kanye nezembatho ezifashisayo nge-80% isaphulelo. Isexwayiso: imithetho ye-UAE inzima kakhulu, kufanele ilandwe ngokucophelela kungakhathaliseki ukuthi iyisakhamuzi.
Amaholidi asezweni laseNdiya laseGoa athandwa kakhulu ngabantu abasha, okuyinto eheha ithuba lokuba hhayi nje kuphela esihlabathini, kodwa futhi nokuphila ebusuku. I-India idinga kakhulu isiko layo elingavamile, ukudla okumangalisayo kanye nesimo sengqondo sefilosofi. Abathandi be-exotic bazothola izindawo eziningi ezokuthakazelisa ukuvakashelwa, ezigcwale ukuphumula kwebhishi.
Isexwayiso: ngaphambi kohambo kuyisifiso sokuthola imishanguzo yokulwa nesifo sofuba nesifo somzimba we-typhoid, futhi ku-Goa kugcina ngokucophelela imithetho yokuhlanzeka.
I-Thailand iba iMecca yabathandi beholide ebusika ebusika. Ngaphandle kokubhukuda emanzini afudumele eGulf of Thailand (izinga lokushisa lama-25), ungenza ukudilika nokushayela, ukukhetha ukuhlola imizila yasendulo ye-civilization exo. EmaRussia, ukungena eThailand bekulokhu kungenaso i-visa-free isikhathi esithile manje.
Uma isabelomali ikuvumela, ungenza uhambo oluya ePharadesi Maldives. Kuyoba okuthakazelisayo ngokukhethekile ukuvakashela iziqhingi zaseCoral, ngoba izwe elingaphansi kwamanzi e-Indian Ocean kule ndawo enhle licebile kakhulu futhi linemibala. Amabhishi aseMaldives amahle kakhulu anesihlabathi asinika ukuthula nokuthula.
Muva nje, inani elibalulekile lezivakashi zaseRashiya ngoDisemba ziya eCuba. Isimo sesiqhingi sinhle kakhulu: izihlabathi zegolide, ulwandle olucacile, ama-orchid azintandokazi. Uba nethemba elihle labakhileyo bendawo kanye nekhono labo lokudala indawo yamaholidi. Okunye okubalulekile okungeziwe nokungena kwe-visa kumaRussia.
Isexwayiso: esiqhingini esendaweni ye-pesos yendawo kuphela, ekuthengiseni, iphesenti eliphezulu lihoxiswa ekushintshaneni kwemali.
Indawo yaseChilean yaseViña del Mar, izivakashi zaseRussia zivakashela ngokungapheli, ngezindlela eziningi lokhu kubangelwa izindleko ezihamba phambili zokuhamba emoyeni. Kodwa uma uhamba ngeholidi kule ndawo enhle ngesimo sezulu esincane esincane, uzothola isipiliyoni esingenakulibaleka! Indawo yokubhuka ihlanganisa amabhishi amaningi amaningi, amapaki amahle. Edolobheni kukhona iminyuziyamu emihle kakhulu kanye nezikhumbuzo zokuqala zokwakha.
Kunezinye izindawo eziningi zeholide elimnandi: i-Malaysia, iDominican Republic, iSiishila, i-Vietnamese Phan Thiet, njll. Lapho ukhetha isiqondiso seholide yasebusika, cabanga ngezinto eziza kuqala kanye namathuba akho. Futhi, yiqiniso, ngesikhathi esifanele, amathikithi encwadi!
Indlela yokusebenzisa ikhampasi?
Ukwenqaba kwi-visa ye-Schengen
Ukulungiselela ingane ngendiza
Savonlinna - ezikhangayo
Isakhiwo se-Boeing 777 200 - ingaphakathi
Imithetho yokuphatha uketshezi endizeni
Visa eya eVietnam eRussia
UKhisimusi eYurophu - kuphi?
I-Kalutara, eSri Lanka
Omkhulu Opera eParis
I-senada yokulahlekelwa isisindo
Vardane - ukuzijabulisa
I-strawberry mousse - iresiphi
I-Temari - isigaba somsebenzi
I-Zara - iqoqo lehlobo lehlobo lehlobo
Imfashini yabesifazane abancane 2014
I-ZRR ezinganeni - izimpawu, ukwelashwa
Yini i-zinc equkethe?
Itiye le-Ginger - lihle futhi libi
Abesifazane abaphezulu abangenakuqhathanisa abayishumi kunamadoda
UStephen Belafonte ukhulume ngokuhlukana kuMel Bi: "Lesi yisipho esihle kakhulu sikaKhisimusi"
I-spasms yamathumbu - izimpawu
I-acrylic ikhishi lokusebenza ekhishini
Ukubuyiselwa komjikelezo emva kokubeletha - zonke izici zokujwayelekile komsebenzi wokuzala
Indlela yokusebenzisa umshini wekhofi?
U-Lily-Rose Depp wenza i-start yakhe eqenjini elizimele
Izikhwama zonyaka ziboshwe
Indlela yokusebenzisa ugwayi we-electronic?